Guddoomiyaha golaha shacabka oo ka soo horjeestay kala diristii guddiga maaliyadda - Halbeeg News
Guddoomiyaha golaha shacabka oo ka soo horjeestay kala diristii guddiga maaliyadda
MUQDISHO(HALBEEG)-Warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa gabi ahaanba daaqadda looga tuuray kala diristii guddiga maaliyadda ee baarlamaanka ee uu kalhore ku dhawaaqay guddoomiye ku xigeenka kowaad ee golaha shacabka Cabduwali Sheekh Ibraahim Muudeey.
Qoraalka uu soo saaray guddoomiye Mursal ayuu ku sheegay in kala diristii lagula dhaqaaqay guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ay ahayd mid waxba kama jiraan ah oo aan wax sharci ah loo marin, isaga oo sheegay in baabi’inta go’aanka kala dirista guddiga uu u cuskaday qodob dastuuri ah.
Guddoomiyaha ayaa ugu baaqay guddiga maaliyadda, miisaaniyadda iyo isla xisaabtanka in mar kale ay shaqadoodii dib usii amba qaadaan.
“Waa in guddiga miisaaniyadda, maaliyadda, qorsheynta iyo la xisaabtanka hay’adaha dowaladdu ay sii wataan shaqadoodii caadiga ahayd” ayuu yiri guddoomiya mursal.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale amar ku siiyay guddiga in ay si deg deg ah ay usoo dhamaystiraan howlihii xisaabxirka 2017 iyo miisaaniyadda 2019-ka.
“Waa in guddiga uu si dhakhso ah usoo dhamaystiraa xisaabxirka 2017 iyo miisaaniyadda 2019 ka hor inta uusan dhamaanin sanadka 2018” ayaa lagu yiri war saxaafadeedka guddomiyaha.
Guddoomiyaha ayaa xukuumadda federaalka ka codsaday inay u hoggaansanto shaqada ay hayaan guddiyada golaha shacabka ee kor joogteynta iyo isla xisaabtanka hey’adaha dowladda, isaga oo sidoo kalena codsaday in la dhowro madaxbannaanida golaha oo ah laanta sharci dajineed ee dalka.
Go’aannada kasoo baxay guddoonka golaha shacabka ayaa imanaya iyada oo uu weli taaganyahay buuq iyo ismari waa ka dhashay arrintii kaladirista guddiga maaliyadda ee baarlamaanka.